I-Buddhist Circuit Of Odisha Tour | Shayela: + 91-993.702.7574 yokubhuka
I-Buddhist Circuit Of Odisha Tour
U-Odisha namhlanje uya kuba yinto enqabileyo yokutyelela. Amawaka eetempileni, ezenkcubeko kunye nezakhiwo zemveli kunye nobuhle bemvelo behlathi kunye Zasendle njl njl Phakathi kwazo zonke ezi, iCandelo leBuddhist le-Odisha Tour liye lithandwa kakhulu. Amawaka amnandi endala Imifanekiso yaseBuddha zikhoyo kwiindawo ezahlukeneyo kwilizwe. Isithili seBuddhist se-Odisha Tour sisiza abantu ukuba bandise ulwazi lwabo malunga nenkcubeko yakudala yaseBuddha kunye ne-Old Buddhist Temples ye-Odisha. I-Buddhist Circuit Of Odisha Tour inezinto ezibalulekileyo zobugcisa zaseplastiki zase-Odisha ezimele i-Bodhisattva Avalokiteshvara kwiifom zakhe ezahlukeneyo ezifana nePadmapani, Lokeshvara, Vajrapani njl. Omnye unokufumana imifanekiso yeTara, iManjusri, Amoghasiddhi njl. I-museum yaseLalitgiri igcina izibalo eziqhelekileyo zeBodhisattva kuyo. Amanani amaninzi amaninzi afumaneka kwi-Udayagiri kunye no-Ratnagiri. Isithili seBuddhist se-Odisha Tour ikuvumela ukuba uhlolisise zonke ezi ndawo ezintle kwi-Odisha.
BHUBANESWAR - URATNAGIRI - UDAYAGIRI - LALITGIRI - JORANDA - IPURI - IBHUBANESWAR (05N)
USUKU 01: BHUBANESWAR
Ekufikeni kwi-Bhubaneswar Airport / iSitishi seSitishi, uhanjiswe kwihotele. Ngomso emva kokuhlwaya eNandankanan Zoo (Valiwe ngoMvulo). Ngobusuku eBhubaneswar.
USUKU 02: BHUBANESWAR
Emva kokuhambela kwasekuseni ukutyelela kweetempile- i-Lingaraj, i-Rajarani, i-Parasurameswar, i-Mukteswar, ne-Bhaskareswar Temple ukusuka kwi-7th ukuya kwi-12th kwinkulungwane ye-AD. Ukutyelela kwintambama eKhandagiri & Udayagiri Jain emaphandleni yi-2nd leminyaka BC. Ngobusuku eBhubaneswar.
USUKU 03: BHUBANESWAR - URATNAGIRI - UDAYAGIRI - LALITGIRI
Emva kwesidlo sasekuseni Uhambo olusondeleyo oluya ku-Ratnagiri, i-Udayagiri & Lalitgiri eBhondhist Monasteries & Stupas. Ngobusuku eBhubaneswar
USUKU 04: IBHUBANESWAR - NUAPATNA -JORANDA - UBHUBANESWAR
Emva kwesidlo sasekuseni ukuya eNuapatna ehamba kwidolophana, i-Sadeibarini Dhokra idolophana kunye ne-Mahima Cult e-Joranda. Ngobusuku eBhubaneswar.
USUKU 05: IBHUBANESWAR - IKONARK - IPURI - IBHUBANESWAR
Emva kwesidlo sakusihlwa Ukuvakasha ukuya ePuri kwindlela eya eDhauli (i-Shanti Stupa), i-Pipili (i-Applic village village), i-Konark (i-Sun Temple) ne-Chandrabhaga Beach. Ukuhlwaya eNkundleni yeJagannath yeTempile (abangewona amaHindu abavunyelwe ngaphakathi kweTempile), iRughurajpur (umzobo waseMzaneni). Ngobusuku eBhubaneswar.
USUKU 06: ISEBE